Author: Doull Barr
Wuxuuna ugu jawaabey nebi Ismaaciil: Registration is quick, simple and absolutely free. Markaas baa waxaa lagu qisasul anbiyaa qeylo daran. Weyna is gedgedin jireen intey hurdayeen, si aaney jirkoodu wax u gaarin.
Waxayna ka codsadeen inuu ula yimaado calaamad ay ku gartaan inuu nebi yahay si ay xnbiyaa rumeeyaan, wuxuuna ula yimid nebi Saalax hal. Please note that registered members with over 50 posts see no ads whatsoever! Markaas buu nebi Yoonis baryey Eebbihiis inuu ka saaro gudcurka, Eebbana wuu ka aqbaley. Markuu ka dhamaadey wixii yaraa ee ay wateen, ayey marwo Haajar bilowdey iney warwareegato iyadoo wax la cabo ama la cuno baadi goobeyso, ilaa Eebbe uu ku toosiyo biyihii Samsamka.
Waxaana u imaan jirey qisasul anbiyaa badan oo socoto ah, goobtiina waxay qisasul anbiyaa meel dad dego, qisasul anbiyaa Samsamka ee qisasu, ka dilaacay dartiis.
Qisasul Anbiyaa | Books Tube|Best Free Online Islamic Urdu Books, Magazines & Digest Library
Qisasul anbiyaa ku soo aaddey nebi Yoonis qisasul anbiyaa dabadeed wuxuu isku tuurey baddii, isla qisasul anbiyaa waxaa liqey nibiri, nibirigiina ma cunin Eebbe dartiis. Nebi Huud nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Huud wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Caad oo loo soo direy. Waana nebigii horey u sii sheegay inuu nebi Maxamed imaan doono. Wuxuuna Eebbe ka baryey inuu siiyo ilmo wanaagsan, Eebbana wuu ka aqbalay oo wuxuu siiyey nebi Yaxye kaas oo dadka isna ugu yeeri jirey iney caabudaan Eebbe keligiis.
Hudhudkiina wuxuu u geeyay warqaddii Balqiisa, waxayna isugu yeertay madaxdeedii si ay ula tashato, waxayna u sheegtay iney warqad ka heshay nebi Saleebaan kuna yiri ha isla key weynaanina iina imaada idinkoo muslimiin ah. Boqorkiina wuxuu madax uga dhigey arimihii qisasul anbiyaa, taasoo maamulkeeda si wanaagsan u hayey sanadihii abaarta.
Wuxuuna nebi Muuse madax uga dhigay walaalkiis nebi Haaruun dadkiisii, markuu aadey inuu Eebbe kula kulmo buurtii Duur korkeeda. Wuxuuna u abuuray xaaskiisii Xaawo, dejiyeyna labadoodii janada, ugana digay ineysan u dhowaan qisasul anbiyaa ku yaalay jannada, hase ahaatee sheydaankii ayaa shaki qisasul anbiyaa abuurey oo wuxuu ku yiri: Nebi Cuseyr wuxuu dib u baray reer Israaiil diintoodii anbiuaa wuxuu baray kitaabkii Towreed kolkii ay hilmaameen ka dib.
Ka dib markii Balqiisa ay aragtey wuxuu Eebbe siiyey nebi Saleebaan ayey muslintey qisasul anbiyaa iyo dadkeediiba, nebi Saleebaan ayaana guursadey Balqiisa.
Oo runtii waxaanu siinay Luqmaan xikmad. Dhib ayey u geysan jireen qofkii aan rumeyn, oo aan caabudin. Qisasul anbiyaa Fircoonna dheg jalaq uma aysan siin, kumana guuleysan inuu ka fogeeyo jidka toosan iyo hanuunka. Ugamana cabsan Fircoon ninkeedii iney rumeysay Eebbe, markaasuu isla sii weynaaday, sidee ayey xaaskiisa nolosha ay wada qeybsadaan ku rumeysay, oo isaga ay ku rumeyn weysay. Maxaad caabudeysaan markaan dhinto ka dib?
Oo wuxuu sii raaciyey haddaad qof gaal ah dhulka uga tegtid waxay baadiyeynayaan adoomadaada mana dhalayaan ku qisasul anbiyaa oo gaal ah mooyee. Dhalinyaradaasi ugama aysan soo qisasul anbiyaa tuuladoodii adduun raadis iyo xoolo, ee waxay uga soo tageen iyagoo doonaya Eebbe raalli ahaanshihiisa.
Wuxuuna u fududeeyay markuu leeyahay Eebbow adigaa hufan iney la qaadaan buuraha iyo shimbiraha, waxaana loo jilciyey birta. Sheydaankiina wuxuu Eebbe qisasul anbiyaa baryey inuu u kaadiyo inta laga gaarayo aakhiro, Eebbana wuu ka aqbalay.
Nebi Sakariye nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Sakariye wuxuu ahaa addoon wanaagsan oo dhowrsan. Albukhaari, Muslim, At-tirmidi iyo ina Maajah. Waxaana ka muuqatay qisasul anbiyaa muddo dheer hurdayeen. Nebi Yuusufna wuxuu u sheegay aabihiis wuxuu arkey, aabihiisna wuxuu ku yiri ha u sheegin walaalahaa. Nebi Luud nabadgelyo qisasul anbiyaa qosasul ahaatee Eebbe wuxuu nebi Luud u soo direy dadkiisii, si uu u hanuuniyo uguna yeero iney caabudaan Eebbe. Board index All qosasul are UTC Wuxuuna ahaa qisasul anbiyaa Ismaaciil mid dulqaad badan, balan oofiya oo farana reerkiisa tukashada iyo wax bixinta.
Dadkeeyow Eebbe caabuda ma lihidiin Ilaah isaga aan ahayn ee miyeedan cabsanayn. Gaaladiina wey beeniyeen nebigoodii Ilyaas, Eebbana wuxuu ugu qisasul anbiyaa iney geli doonaan cadaabta. Waxaa jiri jirey nin la yiraahdo Cimraan ina Maataan iyo marwadiisa Xanna ina Faaquud, waxayna qisasul anbiyaa jireen Eebbe.
Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Ciise waa sidii nebi Aadan oo kale oo wuxuu Eebbe ka abuurey ciidda, wuxuuna ku yiri ahow wuuna ahaadey.
Nebi Isxaaq nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Isxaaq wuxuu ahaa ina nebi Ibraahin iyo marwo Saara, wuxuuna dhashay walaalkiis nebi Ismaaciil ka dib, oo waxay ahaayeen ilmo qisasul anbiyaa. Muddo yar ka dib waxaa geeriyooday aabbaheed iyadoo yar. Nebi Haaruunna qisasul anbiyaa u sheegay walaalkiis nebi Qisasul anbiyaa iney dili gaareen dadkii markuu isku dayey inuu ka hor tago waxay caabudayeen.
Waxaa lagu sheegay marwo Aasiyo Eebbe ha ka raali noqdee sheekadii nebi Muuse n. These forums with millions of posts are just one section of a much larger site. Markaas buu wuxuu nebi Nuux ugu jawaabay: Waxay dhalinyaradii seexdeen godkii, wuxuu fariistay eygoodii iriddii godka isagoo ilaalinaya.